Xisbiga awooda shacabka oo war ka soo saaray dilkii Almaas Elman - Awdinle Online
Xisbiga awooda shacabka oo war ka soo saaray dilkii Almaas Elman
November 23, 2019 (Awdinle Online) – Xisbiga awooda shacabka ayaa war saxaafadeed ka soo saaray dhacdadii maalin ka hor lagu dilay Almaas Elman oo aheyd gabar u ololeysa dhinaca nabadda, horayna Diblomaasi u soo noqotay, iyadoo lagu toogtay gudaha Xerada Xalane.
War saxaafadeedka ka soo baxay Xisbiga awooda shacabka ayaa lagu sheegay in nasiib darro ay aheyd dilkii 20-kii bishan loo geystay Almaas Elman,.
“Hadal-heynta saxda ah waxay ku habooneyd maanta in diiradda la saaro sidii caddaalad loogu helilahaa dilka Almaas Elman oo sida aan wada ognahay aabaheed Elman Ali Ahmed Allaha u wada naxariistee labaduba ay gacan ka xaqdaran dishay sanadihii 1996 iyo 2019. Ugu yaraan qoyska reer Elman waxay naga mudan yihiin maanta in aan ku wada mashquulno sidii ay caddaalad u heli lahaayeen.
Su’aallaha jawaabaha u baahan waa:
Yaa dilay Almaas Elman?
2. Halkee ayay mareysaa baaristu?
3. Xerada Xalane oo amnigeeda ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada AMISOM, warbixin hordhac ah ma kasoo saareen, iyaguse baaritaan madaxbanaan ma wadaan?
Jawaabaha su’aallaha kore ayay tahay inaan diiradda saarno ka hadalkeeda oo aanan marnaba xaaladda taagan nagala weecin.
Ogow shacab iyo mas’uulba hadii aad ogolaatid in ka hadalka waxa xaqqa ah lagaa weeciyo, noloshu waa silsilad marbay murugadu deris kula noqoneysaa ee ha sugan maalinta ay ku hoos taal. Maanta ayaad kartaa inaad xaqqa ama runta sheegtid .”
Almaas Elman ayaa waxaa ay Walaalo ahaayeen gabadha Soomaaliyeed ee u tartamaysa billadda Nabadda ee Ilwaad Elman oo si weyn looga yaqaano Caalamka,waxaana weli la ogeyn cida ka dambeysa dilkaas.
Previous articleGaadiidleyda BL- Oo Banaanbax Ka Wada Magaalada Muqdisho
Next articleMa dhabbaa in DP World ay Dekedda Berbera ka Dhigayso Marinka ugu Muhiimsan ee Geeska Afrika